नेपाल–भारतसम्बन्ध अझै बलियो पार्नुपर्छ : राजकुमार सिन्धी
अध्यक्ष, नेपाल–भारत मैत्री संघ
० तपाई नेपाल–भारत मैत्री संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । संघलाई अघि बढाउन के कस्ता योजनाहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
— मेरो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । साथै, म गौरब महसुस गरिरहेको छु । नेपाल र भारतबीच युगौंदेखिको सम्बन्ध छ । नेपाल र भारतबीच परापूर्वकालदेखिको मैत्रीलाई मजबुत बनाउनु नै यो संस्थाको उद्देश्य छ । यो संघको करिब ६२ वर्षअघि स्थापना भएको थियो ।
० नेपाल भारत मैत्री संघको प्रयासमा के–कस्ता उपलब्धि हासिल भएका छन् ?
— हामीले विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्ना शाखामार्फत सीमाक्षेत्रमा भेलाहरू गराउँदै आएका छौं । दुवै देशका सामाजिक, राजनीतिकलगायत क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्दै आएका छौं । यसका साथै दुवै देशका जनताले भोग्दै आएका समस्या निराकरणमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं । नेपालमा नेपाल भारत मैत्री संघ छ भने भारतमा भारत नेपाल मैत्री संघ छ । हामीले विभिन्न पर्वलगायतमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौं । यस्ता कार्यक्रममा दुवै देशका जनताले आफ्ना विचार र भावना राख्ने गर्छन् ।
० नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा कहिले काहीं समस्या आउने गर्छ । केही महिनाअघि नाकाबन्दीका कारण सम्बन्धमा कटुता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले समस्या समाधानका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ?
— हामीले काठमाडौं, पोखरालगायत क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम ग¥यौं । हामीले दुवै देशका विशिष्ठ व्यक्तिहरूलाई बोलाएर समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थियौं । यसका साथै दुवै देशमा हुने कुनै अप्ठ्यारालाई सौहाद्रपूर्ण तरिका कसरी हटाउन सकिन्छ त, यस विषयमा बेला–बेलामा कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौं । त्यसबेला हामीले गरेको प्रयासबाट धेरै सफलता पनि पाएका थियौं ।
० अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो पाउनुभएको छ ?
— त्यसबेलाका कटुता बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले विकासलाई मूल एजेण्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । भारतसँग सहकार्य गर्दै नेपालमा विकासको पथमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । हामीले भारतबाट कति लाभ लिन सक्छौं, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । किन भने नेपालका लागि धार्मिक पर्यटनको ठूलो बजार भारत हो । हामीले भारतीय पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी नेपाल भित्र्याउन सक्यौं भने पनि नेपालको कायापलट हुनुसक्छ । यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा कसरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हामीले धार्मिक पर्यटनका लागि धेरै नै प्रयास गरिरहेका छौं ।
० पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सरकारले गरिरहेको कामलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ ?
— सरकारी निकाय पर्यटन बोर्डले आफ्नो किसिमका काम गरिरहेको छ । नेपाल भारत मैत्री संघले पनि आफ्नो किसिमले पर्यटक भित्र्याउन अभियान चलाइरहेको छ । हामीले चेन्नई, दिल्ली, लखनऊलगायत विभिन्न ठाउँका पर्यटक भित्र्याउन हामीले नेपालका साथै भारतका पदाधिकारीसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।
० नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा बेला–बेलामा खटपट भइरहेको हुन्छ । यसको कारण के होला ?
— नेपाल र भारतका जनताको सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारा देखिएका छैनन् । सरकारबाट समन्वयको कमि चाहीं देखिन्छ । परराष्ट्र नीतिमा केही समस्याहरू देखिएका छन् । कहीं कतै कुनै विषयमा असमझदारी देखिँदा हामीले दुवै पक्षका बीचमा पुलको काम गर्दै आएका छौं । तर, यसका लागि नेपाल सरकारबाट अलि बढी रेस्पोन्स खोजिरहेका छौं ।
० नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा समस्या आउन नदिनका लागि कसरी दुवै देश अघि बढ्नुपर्छ ?
— जनस्तरमा सीमा क्षेत्रमा कहिले काहीं समस्याहरू भइरहन्छन् । तर, यस्ता कुरालाई तत्कालै निराकरण गर्न सक्छौं । त्यो ठूलो कुरो होइन । तर, सरकार र सरकारबीच असमझदारी हुने गरेको छ । हुन त यसमा हामीले अतिकति ध्यान दियौ भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ । हामीले विभिन्न कार्यक्रममा भारत जाँदा र त्यहाँका नेताहरूलाई भेट्दा उनीहरूले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा गम्भीर समस्या रहेको भनेका छैनन् । उनीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् कि छिमेकी मुलुक हुँदा कहिले काहीं केही कुरामा समस्या आउन सक्छ । तर, ती समस्या तत्काल हल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
० नेपालमा हरेक कुराको प्रभाव भारतबाट पर्ने गरेको छ । तर, समृद्धि र विकासका लागि अग्रसर हुनुपर्ने कुराको प्रभाव किन नेपालमा पर्न सकेको छैन होला ?
— यसको मुख्य कारण के हो भने हामीले सत्यतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनौं । हामीले भारत र चीनबाट ठूलो फाइदा लिन सक्छौं भन्ने कुरातर्फ ध्यान नै दिइरहेका छैनौं ।
० नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । जसले गर्दा दुवै तर्फ अपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेको छ । सीमालाई कसरी चुस्त पार्न सकिन्छ ?
— केही समस्या छ । तर, अहिलेसम्म आइपुग्दा मलाई लाग्छ, सीमा क्षेत्रका समस्या निराकरण गर्न दुवै देशका जनता सक्षम छन् । सीमा क्षेत्रलाई चुस्त पार्न दुवै पक्षका सुरक्षा निकायले ध्यान दिनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्छ । अपराधिक गतिविधिलाई निरूत्साहित गर्दै लैजानुपर्छ ।